Madaxweyne Farmaajo oo shaaciyay shuruudaha laga rabo qofka ra’iisul wasaaraha noqonaya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo shaaciyay shuruudaha laga rabo qofka ra’iisul wasaaraha noqonaya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta shaaca ka qaaday shuruudaha rasmiga ah ee laga doonayo qofka uu rabo inuu u magacaabo xilka ra’iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo la filaayo inuu dhawaan si rasmi ah ula wareego xilka loo doortay ayaa sheegay inuu haatan si fiican uga fiirsanayo shaqsiga uu u magacaabi doonno xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in qofka uu magacaabi doonno uu kusoo xulan doonno oo kaliya aqoontiisa, kartidiisa iyo inuu noqdo qof ay wada-shaqeyn karaan mudadda uu xilka haayo ee 4-ta sano soo socota.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeysay kulamo kala duwan oo aan joogsi lahayn la yeelanaayay dhowr musharixiin iyo xildhibaano kasoo kala jeeda beelaha Hawiye, waxayna dhamaantood yihiin kuwa si weyn u daneeynaya xilka ra’iisul wasaarenimo.
Ugu dambeyntii, musharixiintaasi dhamaantood ayaa ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inuu xilka ra’iisul wasaarenimo u magacaabo beeshooda, maadaama ay iyaga xaq u leeyihiin xilkaasi, wuxuuna madaxweynaha musharixiintaasi ku wargeliyay inuu tixgelinayo codsigooda.